Cisco Packet Tracer - နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို GNU / Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
Cisco Packet Tracer - နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို GNU / Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အတွက် နည်းပညာရှင်များ ချစ်သူ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့် GNU / Linuxအခမဲ့ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအစီအစဉ်များရှိသည် GNS3, သောခွင့်ပြု ခြင်း simulation (ဆောက်လုပ်ရေး, ဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း) တစ် ဦး ကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကွန်ယက်၏။ ထို့အပြင် GNS3 ကျောင်းသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကွန်ယက်လေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အထူးသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်စရာမလိုဘဲကွန်ယက်ကိုလွယ်ကူစွာဒီဇိုင်းဆွဲရန်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်သူတို့၏အတန်းများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူများအတွက် "Cisco ကွန်ယက်အကယ်ဒမီ" သူတို့လည်းကြိုက်တယ် GNU / Linux များ, ၏ဇာတိ client ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် "Cisco Packet Tracer" အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systems များအတွက်။
သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးပြောတာကတည်းကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ FromLinux ဘလော့ မည်သို့တပ်ဆင်ရန်မည်သို့ Cisco သည် Packet ကို Tracerတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပြီးအောက်ပါ entry ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖိုင် "* .bin" အချိန်၏:
Ubuntu 5.3.3 (13.04 bits) တွင် Paquet Tracer 32 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် install လုပ်ခြင်း
ငါတို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာကငါတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်း အောက်ပါ entry တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အချို့သောဗားရှင်းကို install ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသည့်အခါသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်:
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကို download လုပ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရာနည်းလမ်းကိုရှင်းပြပါမည် ဖိုင် "* .deb" ၏ website တွင်ရရှိနိုင်ပါ "Cisco ကွန်ယက်အကယ်ဒမီ".
1 Cisco သည် Packet ကို Tracer: ကွန်ယက်ကို simulation Tool ကို
1.1 Cisco Packet Tracer ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 GNU / Linux တွင် Cisco Packet Tracer ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
1.3 installer ကို download လုပ်ပါ
Cisco သည် Packet ကို Tracer: ကွန်ယက်ကို simulation Tool ကို
Cisco Packet Tracer ဆိုတာဘာလဲ။
၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရသိရသည် "Cisco ကွန်ယက်အကယ်ဒမီ" ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာကို -
"ORn သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းတွင် router များ၊ switches များ၊ ၎င်းသည်သင့်အားကွန်ယက်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စမ်းသပ်မှုပြုရန်၊ မော်ဒယ်များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင် "အကယ်၍ ... ?" ကိုမေးမြန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤစက်ကိရိယာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြdeviceနာဖြေရှင်းခြင်း၌ဤအတွေ့အကြုံရှိခြင်းသည် Cisco အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်". Packet Tracer မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
GNU / Linux တွင် Cisco Packet Tracer ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်လက်ရှိ installer ကို download လုပ်ပါ «Cisco ကွန်ယက်အကယ်ဒမီ« ရရှိနိုင်သည့်သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ပုံတင်ရမည် Cisco သည် Packet ကို Tracerနောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ link ကို. မှတ်ချက်လက်ရှိ installer ကိုရရှိနိုင်ပါ အတွက် 64 bit အတွက် Linux မှသက်ဆိုင်ရာတစ်ခုဖြစ်သည် 7.3.1 ဗားရှင်း.
မှဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးနောက် လက်ရှိ installer ကိုရရှိနိုင်သည် (PacketTracer_731_amd64.deb) ပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည် terminal manager သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်မှတစ်ဆင့် package manager နှင့်ထုံးစံအတိုင်းထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက်၊ လုပ်ငန်းကို terminal မှလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ သင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းပြီးအမှားအယွင်းများရှိပါကထည့်သွင်းတပ်ဆင်မှုအမှားများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ မည်သည့် package ကိုမဆို install မလုပ်မီ၎င်းတို့အားအရင် install လုပ်ရန်မည်သည့်မှီခိုမှုများလိုအပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်အကြံပြုသည်။ ဒီအမှု၌ 7.3.1 ဗားရှင်း de Cisco သည် Packet ကို Tracer အောက်ပါ command ကို၎င်း၏မှီခိုကြည့်ဖို့ကွပ်မျက်ခံရရမယ်:
ထို့ကြောင့်၊ တူညီသောအားသွင်းရန်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်
အရာအားလုံးအောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ပြီးပါက၊ အောက်ပါ Command ဖြင့် PacketTracer_731_amd64.deb package ကို install လုပ်ပါ။
တစ် ဦး ၏မှီခိုသည့်အခါ, ထိုသတိရပါ အထုပ် "* .deb" download လုပ်ထားသောအခါ၊ များသောအားဖြင့်အောက်ပါ Command များကိုသုံးခြင်းဖြင့်အမှားများကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
အဲဒီအစား၊ သင်ဒီသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုကိုတပ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင် အထုပ် "* .deb" မှီခိုများကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုပါ "apt-get, aptitude or apt" ကိုနှိပ်ပါ။ အားဖွငျ့ဖွစျသညျ "install" option ကိုအောက်ပါဥပမာမှာပြထားတဲ့အတိုင်း command command နဲ့အတူ၊
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာအမှားအယွင်းတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ကို run လိုက်တယ် Cisco သည် Packet ကို Tracer ပြီးသားအတွက်ထဲမှာရှာနေ installed application menuရလဒ်အဖြစ်ကပြီးပြည့်စုံသောကွပ်မျက်ရယူ။ အပေါ်ကပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Cisco သည် Packet ကို Tracer ခေါ်ဆိုခ GNS3။ သင်တတ်နိုင်လျှင်သုံးပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Cisco Packet Tracer»သူသည်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော network simulation tool တစ်ခုဖြစ်သည် «Cisco»နှင့်၎င်း၏ကျော်ကြားမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် Cisco ကွန်ယက်အကယ်ဒမီ ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအစီအစဉ်ကိုအောက်မှာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်အိုင်တီတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Cisco Packet Tracer - နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို GNU / Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ငါမသိသော GNS3 သည်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်
မင်္ဂလာပါ, မာရီယာ။ ငါတို့ထံစာရေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤအကြောင်းအရာသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။
Rodrigo Calle အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ, Rodrigo ။ သင်ခန်းစာသည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
အလှူငွေအတွက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ကျွန်ုပ်သည်မှီခိုမှုများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်သွားခဲ့သည်၊ သို့သော်စာဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းများတွင်မှီခိုမှုရှိသည်ဟုညွှန်ပြသည်၊ ထို့နောက်ငါ install လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ၊ ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုကိုတွန်းထုတ်သည်၊ ငါ ubuntu 20lts ကိုသုံးသည်။ packettrancer 8 မှပစ်သောအမှားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
packettracer (8.0.1) ကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ...
Mime-support အတွက်ထုတ်ယူခြင်းအစပျိုးခြင်း (3.64ubuntu1) ...
gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) အတွက်အစပျိုးခြင်း ...
shared-mime-info အတွက်ထုတ်လွှတ်မှုအစပျိုးခြင်း (၁.၃-၁) ...
desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) အတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအစပျိုးခြင်း ...
W: Repository ပျက်သွားသည်၊ packettracer: amd64 (= 8.0.1) တွင်အရွယ်အစားအချက်အလက်မရှိပါ
မင်္ဂလာပါ၊ AppImage ၏ Cisco Packet Tracer ၏စာကြည့်တိုက်များ (သို့) AppImage ကိုဖန်တီးရာတွင်ပဋိပက္ခမရှိသောအခြား AppImage ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပါ။ ထို့နောက် AppImage ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသင်လိုအပ်သည့် GNU / Linux Distro တွင် install လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ install လုပ်လိမ့်မည်။ နောက်မှပြောပါ၊ မင်းဘယ်လိုနေလဲ။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Debian 11 မှာပြဿနာမရှိဘဲအဲဒါကို install လုပ်လိုက်တယ်
ငါတို့က GNS3 ကိုသုံးပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် cisco စမ်းသပ်မှုအတွက်ငါစမ်းသပ်ပြီးပြီ။
မင်္ဂလာပါ Redchameleon မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုမင်း Cisco Packet Tracer ကို GNU / Linux မှာသုံးဖို့အရမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
Island Racer နှင့်အခြားကောင်းမွန်သော Cross-platform ဂိမ်းများကို Linux ပေါ်တွင်စမ်းသပ်ရန်
Kali Linux 2020.3 ကို bash မှ ZSH ပြောင်းခြင်း၊ HiDPI တိုးတက်မှုနှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်